काठमाडौंमा विनाचिरफार मिर्गौलाको पत्थरी र पोस्ट्रेड उपचारसम्बन्धी कार्यशाला, दुई बरिष्ठ मुत्ररोग शल्यचिकित्सक सम्मानित – Health Post Nepal
काठमाडौंमा विनाचिरफार मिर्गौलाको पत्थरी र पोस्ट्रेड उपचारसम्बन्धी कार्यशाला, दुई बरिष्ठ मुत्ररोग शल्यचिकित्सक सम्मानित
२०७६ फागुन २५ गते १८:५१
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा ३ विकल्प : प्लाज्मा फेरेसिस, पुनः प्रत्यारोपण, डायलाइसिस
मूत्र शल्यचिकित्सा (युरोसर्जरी) क्षेत्रमा भएका नयाँ अनुन्धान, विकास र प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान तथा सीपसम्बन्धि दुई दिने कार्यशाला काठमाडौंमा भएको छ ।
वीर अस्पतालको यूरोलोजी विभागको आयोजनामा शनिबार र आइतबार ‘थर्ड फेक्सिवल युरोस्कोपी कोर्स’ कार्यशाला सम्पन्न भएको हो। कार्यशालाका मिर्गौलाको पत्थरी र प्रोस्टेड शल्यक्रियामा प्रयोग हुने आधुनिक शल्यक्रिया विधि रेक्टोग्रेड इन्ट्रारेनल सर्जरी (आरआइआर)मा केन्द्रित रहेको आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं वीर अस्पताल युरोलोजी विभागका प्रमुख डा.पारशमणि श्रेष्ठले बताए ।
आरआइआरएस विनाचिरफार पिसाब नलीबाट मुत्र थैलीमार्फत पाइप छिराएर लेजरको सहायतमा मिर्गौलाको पत्थरी तथा प्रोस्टेटको शल्यक्रियामा प्रयोग हुने विधि हो । यो पद्धतिबाट शल्यक्रिया गर्दा जटिलता र
जोखिम कम हुनुका साथै बिरामीको अस्पताल बसाई र खर्चसमेत कम हुन्छ । यस्तो शल्यक्रियामा लेजरमार्फत पत्थरी फुटाएर र प्रोस्ट्रेड खुर्किएर पिसाबबाट निकालिन्छ ।
अस्पतालले तीन वर्षदेखि अपनाउँदै आएको यो पद्धतिबारेको कार्यशालामा वीरसँगै देशभरका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत युरोसर्जनको सहभागित थियो ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार शनिबार नेपाली र अन्तराष्ट्रिय विज्ञ सर्जन टोलीले ६ वटा जटिल शल्यक्रिया वीर अस्पतालमा गरेका थिए। ठमेलस्थित होटल अलफ्ट काठमाडौं ठमेलमा रहेका कार्यशालाका सहभागी माझ त्यसको त्यसको त्यसको लाइभकास्ट गरिएको थियो।
दिनभरको प्राविधिक शत्रपछि साँझ यो पद्धतिबारे फ्रान्सका चर्चित शल्यचिकित्सक डा. ओलिभिए ट्याक्सर र भारतीय युरोसर्जन टम भाटियाले सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै यसका सफलता दर जटिलताबारे प्रस्तुती गरेका थिए।
नेपालकै ठूलो अस्पतालमध्ये युरोसर्जरीमा पायोनियर मानिने वीरको विभाग यो विधामा उत्कृष्ठ सावित भएको छ ।
६ फ्याकल्टी र ६ एबसिएच रेजिडेन्टसहितको वीरको विभागले सातामा १० देखि १२ वटासम्म शल्यक्रिया यो पद्धतिबाट गर्दै आएको छ । विभागमा फ्याकल्टीतर्फ डा. पारससभित डा. अनिल श्रेष्ठ, डा. रोविन बस्नेत, डा. प्रमोद रेग्मी, डा. प्रकाश क्षेत्री र डा. अरवीन साह कार्यरत छन्। युवा चिकित्सकको बहुल्यता रहेको वीरको युरोलोजी जनशक्तिसँगै उपकरण र प्रविधिका आधारमा पनि वीर अस्पतालको सबैभन्दा अब्बल विभागमध्ये पर्छ ।
निजी अस्पतालहरुमा डेढ लाखसम्म लाग्ने यो शल्यक्रिया वीरमा २० हजारमै सम्पन्न हुन्छ । वीरमा युरोसम्बन्धी जटिल शल्यक्रियासँगै मिर्गौलाको प्रत्यारोपणसमेत हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको चर्चा
नेपालका लागि फ्रान्सका राजदुत फ्रयांकोइस जेभियरले प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर नेपालको युरोसर्जनहरुले नेपालको सेवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने प्रमाणित गरेको बताए । कार्यशालाको उद्घाटनपछि बोल्दै प्रमुख अतिथिसमेत रहेका जेभियरले नेपालमा युरोसर्जरीको थप विस्तार विकासका लागि फ्रान्स सरकारका तर्फबाट सबैखालका सहयोगको प्रतिवद्धता गरे ।
प्रमुख वक्ताको रुपमा रहेका फ्रान्सका युरोसर्जन टेक्सरले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यारोपणको प्रसंग झिकेर नेपालको युरोसर्जरी अनुकरणी भएको बताए । उनले आफूले वीरका चिकित्सकसँगको सहकार्यबाट यो सेवा धेरै अगाडि बढिसकेको महसुस गरेको समेत बताए ।
न्याम्सका उपकूलपति डा. डिएन साहले प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च तहको व्यक्तिको नेपालमै प्रत्यारोण भएकोमा नेपालका सम्पूर्ण यूरोलोजिस्टहरु बधाईको पात्र भएको बताए । आयोजक समितिका निर्देशक डा. अनिल श्रेष्ठ र सचिव डा. रोविन बस्नेतले विश्वव्यापी रुपमा व्याप्त कोरोनाको त्रासका बीचमा पनि कार्यक्रम सफल भएको भन्दै सफल पार्न साथ लिने राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिनिधिको प्रतिवद्धताको प्रशंसा गरे ।
बस्नेतले आगामी दिनमा पनि विभागले यस्ताखालका ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम जारी राख्ने बताए ।
दुई बरिष्ठ यूरोसर्जनको सम्मान
तेस्रो युरोस्कोपी कोर्सको अवसरमा वीर युरोलोजी विभागले दुई बरिष्ठ युरोलोजिस्टहरुको सम्मानसमेत गरेको छ । वीरका युरोलोजी विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख डा. अर्जुनदेव भट्ट र बि एण्ड बी अस्पतालका डा. जगदिशलाल बैद्यलाई सम्मान गरिएको हो ।
पाल्पामा जन्मिएका डा. भट्टले मस्कोबाट विशेषज्ञता हासिल गरेर लामो समयसम्म वीरमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसैगरी पोखरामा जन्मिएका डा. बैद्यले पाकिस्तानबाट युरोसर्जरी तालिम प्राप्त गरी हाल बि एण्ड बीमा काम गरिरहेका छन् । विभागले केही वर्षदेखि विभाग तथा अन्य अस्पतालमा रहेर नेपालमा युरोसर्जरीको विकास र विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने चिकित्सकलाई सम्मान गर्ने परम्पराको थालनी गरको थियो ।
Tags: मिर्गौला परीक्षण, युराेलाेजी